Wajiga 2-aad ee shirka golaha musharaxiinta oo Muqdisho ka furmay | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Wajiga 2-aad ee shirka golaha musharaxiinta oo Muqdisho ka furmay
Wajiga 2-aad ee shirka golaha musharaxiinta oo Muqdisho ka furmay
Midowga Musharrixiinta Soomaaliya ayaa xalay isugu yimid wajiga 2-aad shirka Musharraxiinta oo lagu soo bandhigay Warbixin ka hadleysa Xaaladda Waddanka iyo Maareynta Marxaladda Doorashada.
Shirka oo Guddoomiyaha Midowga Musharrixiinta Sheekh Shariif guddoomiyey waxaa sidoo kale looga hadlay xaaladaha Siyaasadeed ee Dalka iyo Raad-raaca go’aannadii lagu xusay War-Saxaafadeedkii Midowga uu ka soo saaray shirkii 6-da cesho uga socday magaalada Muqdisho.
Afhayeenka Midowga Musharrixiinta mudane Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa faahfaahiyay qodobada looga hadlay shirka Midowga Musharrixiinta Soomaaliya xalay uga furmay Magaalada Muqdisho.
Musharixiinta ayaa ka digtay dhibaatooyin horleh oo ka dhaca Deegaannada DG Jubbaland, isla markaana la dhageysto dalabka kasoo yeeray hoggaanka maamulkaas oo ah in Ciidanka Dowladda Federaalka laga qaado Gobolka Gedo.
“Waxa aan marwaliba u taaganahay doorasho nabadgalyo ku dhacda oo aan dhaafin waqtigeeda, waxa aynu maqleynay hadallo xanafleh oo kasoo yeeray dad mas’uuliyiin ah iyo kuwa wajahan Dowlad Goboleedyada sida Jubbaland oo ay dhici karto DFS ay ula dhaqanto Siyaasad gaar ah,” Sidaasi waxaa yiri Afhayeenka Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya 2021.
Dhanka Amniga Musharixiinta Madaxweynaha waxa ay soo jeediyeen in Dowladda Federaalka in Shacabka ay u hoggaamiso sidii kaalintooda ay uga qaadan lahaayeen sugidda Ammaanka oo qaraxyo ay ka dhaceen sida uu hadalka u dhigay.
“Waxaa maalmahaan soo cusboonaaday Dhibaatooyin xagga amniga ah oo ka dhacay Magaalada Muqdisho, aniga oo aad iyo aad uga xun waxa aan leenahay kana tacsiyeenay dadkii & dhalinyaradii ku geeriyootay shilkaas dhanka Amniga ah, waa dadka Soomaaliyeed meel uga soo wada jeestaan Sugidda Amniga, Dowladduna ay siiso hortabinta ammaanka waqtigaan Xasaasiga ah ee lagu jiro Doorashada.” Afhayeenka Musharixiinta Madaxweynaha ayaa sidaas u sheegay Warbaahinta.
Waxa uu sheegay in shirka uu kusoo booqday Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, islamarkaana ay ka wada hadleen arimo dhowr ah oo ku saabsan doorashooyinka iyo doorka Galmudug.
Waxaa uu tilmaamay in Galmudug ay u sheegtay in ay diyaar u tahay xoojinta geedi socodka Soomaaliya,islamarkaana ay raadin doonto xal waara.
Kulankii xalay ee Qoor Qoor kasoo muuqday ayaa loo badinayaa in uu ujeedkiisu ahaa in dhamaan musharixiinta hortooda looga dhageysto qorshaha uu ku doonayo waan-waanta uu rabo in uu ugu kala dab qaado dowlada iyo muraacadka, maadama hore ay isku soo arkeyn masharaxiinta Galmudug kasoo jeeda.
Si kastaba, Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa xod-xodasho kawada Magaalada Muqdisho si ay u jebiyaan gidaarka siyaasadeed ee kahortaagan Doorashada 20/21 si ay ula tartamaan Madaxda talada heysa.